Samachar Batika || News from Nepal » ४ दिदीबहिनीको एकै मण्डपमा विवाह, किन त ?
४ दिदीबहिनीको एकै मण्डपमा विवाह, किन त ?
एजेन्सी– नेपाली समाजमा पछिल्ला दिनहरुमा समाजमा हरेक दिन नयाँ र फरक कामहरु भइरहेका हुन्छन् । जुन कुरा सुन्दा हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्त तर ति वास्तवमैं सत्य हुन्छन् त्यस्तै एउटा भारतको केरल राज्यमा एकै दिन जन्मेका चार जना दिदीबहिनीको एकै दिन विवाह हुने भएको छ । एक भाइसमेत रहका ४ जना दिदीबहिनीको एकै मण्डपमा विवाह हुने खवर अहिले भारतीय सञ्चार माध्ययममा भाइरल बनेको छ ।
उनीहरु पाँच जना एकै दिन जन्मेका थिए । स्थानीय अस्पतालमा जन्मेका चार दिदीबहिनी मध्ये उथराजा, उथारा, उथम्मा, उथरा र उनका भाई उथराजनको जन्म सन् १९९५ नोभेम्बर १८ गते भएको थियो ।
उनीहरुको आमालाई मुटु सम्बन्धि रोगले च्यापेपछि उपचार गराउँदा गराउँदै आर्थिक अभावले उनका बुवाले आ’त्म’ह’त्या गरेका थिए । घरको मुलि गुमाएपछि परिवारको जिम्मा विमारी आमाको हातमा आउँदा उनीहरुले आमालाई सघाउँदै आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
सँगै यो पनी पढ्नुहोस :
प्रकाशित मिति २८ माघ २०७६, मंगलवार ०१:१३